SONATA-CANTATA: မိခင်ဖြစ်သော ကျမ
မသီတာရေ မိခင်တယောက်ဘဝလေးကို သေသေချာချာ ဖတ်သွားတယ်နော့။
ကြက်ကြော်၁ ကောင်တောင်ကုန်တယ်?ဟုတ်ပ ရက်စက်တယ်..အိမ်ကလူနဲ့သာဆို မမသီတာမလွယ်ဘူး..အက်ဝင့် ခြေစွပ်မ၀တ်တတ်လို့ အမေလုပ်သူက သူများကလေးတွေ ဒီအရွယ် ဒါလုပ်နိုင်တယ်..သူလဲလုပ်တတ်ရမယ်ဆိုပီ မရမက ခိုင်းတာ...သများအဆူခံရတယ်...
မိခင်တွေရဲ့ ရင်ဖွင့်စကားတွေက ဘယ်သောအခါမှ ဖတ်ရတာ ရိုးတယ်လို့ မရှိပါဘူး...၊ တခါတခါ စကားလုံးတွေ နူးညံ့ချင်မှ နူးညံ့မယ်၊ ပြောတာဆိုတာ အဆင်တန်ဆာ မပါဘဲ တဲ့တိုး ဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်နေမယ်၊ ဒါပေမယ့် ဟိုးအောက်ခြေမှာတော့ အကြည်လင်ဆုံး စီးနေတဲ့ မေတ္တာစမ်းရေ ရှိနေတာ သေချာတယ်..၊
သားတို့ရုပ်ရည်၊ 'သီတာ' မည်သား၊ 'ရေ' ကြည်'ချမ်း' မြ၊ တစ်ပေါက်ကျလည်း၊ မိဘတို့ဝမ်း၊ ငြိမ်းစတမ်း.. ဆိုတဲ့ စကားလေးက ဒီပို့စ်အရရော၊ ပို့စ်လေဘယ်လ် အရပါ အလိုက်ဖက်ဆုံးပါပဲ...။း)
မမသီတာ ချစ်ဖို့ကောင်းအောင် ရေးတတ်တယ် ။
ညီမလဲ ဟေမာ့ ဗိုက်နဲ့တုန်းက ကြက်ကြော် အရမ်းကြိုက်တယ် ၊ အနံ့ရ၇င်ကို ထိန်းမနိုင်ဘဲ စားချင်နေတော့တာ ။
အောက်ဆုံးစာကြောင်းလေးဖတ်ပြီး မျက်ရည်လည်သွားပါတယ် ။
ဘယ်လောက်မှလဲ စောမွေးတာ မဟုတ်ပဲနဲ့။ ၃၆ ပတ်ဆိုတော့ ၃ ပတ်လေးပဲ စောတာပါလေ။ မဟုတ်ဘူးလား ဟင်။
ဗိုက်ပတ်ကြီးဆိုတာ ဘာကို ပြောတာလဲ။ ဘာလို့ဗိုက်ပတ်ကို ပတ်ထားဖို့ လိုသလဲ။
၂၄ နာရီသွင်းတဲ့ဆေးနဲ့ သောက်ဆေး ၂ ပတ်စာ ပေးတာက ဘာတွေကို ထိန်းပေးတဲ့ ဆေးလဲ။ ကလေး မမွေးလာအောင် ထိန်းပေးထားတာလား။
နောက်တခု မေးချင်တာက လမ်းလျှောက်တာ များလွန်းလို့ preterm labor ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆထားတာလား ခင်ဗျာ။
တော်သေးတယ်...ညီမအခုချိန်ထိ မအန်သေးတာတို့ မစားနိုင်တာတို့ မဖြစ်သေးဘူး...
ီမ အခု ၂လရှိပီ...
အမေဖြစ်ရတာမလွယ်ပါလား ဟရို့..... စီးရီးလိုက်ထွက်မဲ့စာလား အမသီတာ...
JuneOneရေ…အက်ဝင့်တို့ပါပါးကို စိတ်နည်းနည်းလျော့လို့ မသီတာဝိုင်းပြောပေးပါမယ်..း)
ကိုညီလင်းသစ်…မိခင်တယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟ၀န်ခံချက်လို့ ခပ်တည်တည်ခေါင်းစဉ်ပေးဦးမလို့ဗျ..ထုံးစံအတိုင်း ဟိုလူကြီးက ဖျက်လို့…ခေါင်းစဉ်ပြောင်းလိုက်တယ်…
မယ်သံရေ… ထပ်တူခံစားပေးတာလို့ ကျေးဇူး
Julyရေ…ဗိုက်နာလို့ ဆေးရုံရောက်ရောက်ချင်း ထိုင်ခုံခါးပတ်များပတ်သလို ဆိုဖာမှာ ထိုင်စေပြီး ဗိုက်နေရာကို ပတ်ပြီး ဗိုက်နာနှုန်း Labor Contraction ကို တိုင်းတာ...။ ၂၄ နာရီသွင်းတဲ့ဆေးနဲ့ သောက်ဆေး ၂ ပတ်စာ ပေးတာက ကလေး မမွေးလာအောင် ထိန်းပေးထားတာ...ဟုတ်တယ်... ဆေးနာမည်တော့ အမ မေ့နေတယ်...။ လမ်းလျှောက်တာ များလွန်းလို့ preterm labor ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆတာတော့မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်က လေကောင်းလေသန့်ရှူ နေ့စဉ် ပုံမှန် လမ်းလျှောက်ပေးဖို့လိုတယ်..မွေးဖွားရ လွယ်ကူတယ်။
မြတ်နိုးရေ…အမယောင်းမ ကိုယ်ဝန်လွယ်စဉ်ကလည်း ခေါင်းကိုက်တယ်… တတ်နိုင်သလောက် ဆေးမသောက်ပဲ သည်းခံပေးပါ ညီမရေ
စီးရီးလိုက်တော့ မရေးနိုင်ပါဘူး… စစရေ… စီးရီးလိုက်သာ မွေးလိုက်ချင်တာ… ;P
ဖတ်ပြီးတော့ ရင်ထဲမှာ တမျိုးပဲ၊
ဒီလို အတွေ့အကြုံမျိုးတော့ ရတော့မှာ မဟုတ်ပေမယ့်
အပြုံးရေ...တကယ်ကြီးကို သတိရနေတာ...ရန်ကုန်ပြန်လာတုန်းက ရက်တိုလွန်းလို့ အပြုံးနဲ့ ချိန်းမတွေ့ခဲ့ရဘူး...း)
မရေ... မနက်က ဖတ်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့် ဖွင့်မရတာနဲ့ ခုမှတစ်ခေါက် ပြန်လာဖွင့်တာ ရသွားတယ်။
ဇွန်က မိခင်တစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် မမသီတာရေးထားတာကိုဖတ်ပြီး ရင်ထဲမှာ ပြောမပြတတ်တဲ့ တစ်စုံတစ်ခုကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ခံစားလိုက်ရတယ်။ မမအပေါ်ယံမှာ မပျော့ပြောင်းခဲ့ပေမယ့် အတွင်းထဲက ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေက နူးညံ့သိမ်မွေ့နက်နဲနေတာ သားတို့ တစ်ချိန်ကြ နားလည်ကြမှာပါ။ ဇွန်ကတော့ အများနဲ့မတူဘဲ အရင်းအတိုင်းချပြသွားတဲ့ မမရဲ့ မိခင်မေတ္တာကို နားလည်ခံစားမိလိုက်တယ်။း)
သီတာရေ.. ဘယ်လိုလေးမှန်းလဲ မသိ. ဖတ်ရတာ..
ကလေးလေး ကတော့ သူ့မေမေ ချစ်တယ်ဆိုတာ သေချာသိမှာပါ ..
ဇွန်ရေ...အမ လျှော်တာတွေ အများကြီး ကျန်သေးတယ်..ကလေးကို ဈေးဝယ်တဲ့ တွန်းလှည်းလေးထဲ ထည့်ပြီး တွန်းတာ... ကျင်းဖုံးအထစ်နဲ့ တိုက်..တွန်းလှည်းပိတ်..ကလေးမှောက်ရက်ထိုးကျ...ရှေ့သွားကျိုး...ဟင်းးးး
ကလေးလေးက အခု ၁၅နှစ်သားရှိပြီ...
သားတို့ကို ချစ်တတ်အောင် ချစ်နိုင်အောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆုံးမပါမယ်..းP
Facebook မှ ကူးယူလာပါသည်။
Thant Zin ဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာတွေရော၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ တွေရော စုံလို့ပဲ.
January 20 at 1:20am · Like
Sonata Cantata ကျေးဇူးပါ ကိုThant Zin တလောက မိခင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေ Aunty Tint ရေးခိုင်းကတည်းက ရေးထားပြီး သားငယ်ရေစင်အပိုင်း မရေးရသေးလို့ မတင်ဖြစ်ဘူး..ဒီနေ့ Mae Coe ရဲ့ အသင်နားမလည်နိုင်သော မိန်းမ တစ်ယောက် ကို ဖတ်ပြီး... တင်လိုက်တော့တယ်
January 20 at 1:25am · Like · 3
Ming Pauk ပြန်စဉ်းစားနေတယ်..။
January 20 at 1:32am · Like
Sonata Cantata Ming Pauk
January 20 at 1:33am · Like
Wah Wah Hlaing we all have different version to handle but same opinion to them. Yes we got titled of bad names.. like '' rough, cold, tough or cruel'' .. we kept it likeajoke and carry on what we have to do.
January 20 at 3:59am · Unlike · 1
Mae Coe The post is so touching.
January 20 at 8:30am · Like
Sonata Cantata Wah Wah Hlaing
January 20 at 9:06am · Like
Khine Khine Win မ. မိခင်တယောက်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ ရေးတဲ့စာကို မိခင်တယောက်က နှလုံးသားနဲ့ ဖတ်သွားပါတယ်. Morning sickness ဒဏ်ကို အလူးအလဲခံစားဖူးခဲ့တာမို့ကိုယ်ချင်းစာမိတယ် မ ရေ. မ ရေးထားတာဖတ်ပြီး မ ကို ဆေးရုံလာမေးတော့ အရမ်းပင်ပန်းနွမ်းနေတာကို သွားသတိရတယ်. နောက်ဆုံးနားရောက်တော့ မျက်ရည်ဝဲမိတယ်. သားကို အရမ်းပျော့ပျော့ပျောင်းပျောင်း မဆက်ဆံတာတူတယ် မ ရယ်. ဘဝမှာ ထောင်လိုက်ကျကျ ပြားလိုက်ကျကျနေတတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပါ. ကျွန်မသားလေးကတော့ အဲဒီသံချောင်းလိုမာနေတဲ့အမေ့ကို အဖေ့လောက်မချစ်ဘူးလို့ပေါ်တင်ကိုပြောတာ. သူကြီးလာရင် သားလေးရေချမ်းနဲ့ ရေစင်လို နားလည်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် မ ရယ်. မ စာလေးက စာရေးချင်စိတ်ပေါက်လာအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်လွန်းတယ်. ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ စာပြန်ရေးဖို့ကြိုးစားမယ် မ ရေ.
January 20 at 9:09am via mobile · Unlike · 1
Sonata Cantata Khine Khine Win
January 20 at 9:20am · Like
Henry Chen ဘယ်လောက်မှလဲ စောမွေးတာ မဟုတ်ပဲနဲ့။ ၃၆ ပတ်ဆိုတော့ ၃ ပတ်လေးပဲ စောတာပါလေ။ မဟုတ်ဘူးလား ဟင်။
January 20 at 9:23am · Like
Henry Chen ဗိုက်ပတ်ကြီးဆိုတာ ဘာကို ပြောတာလဲ။ ဘာလို့ဗိုက်ပတ်ကို ပတ်ထားဖို့ လိုသလဲ။
January 20 at 9:29am · Like
Sonata Cantata ဟုတ်.. Henry Chen ... ဗိုက်နာလို့ ဆေးရုံရောက်ရောက်ချင်း ထိုင်ခုံခါးပတ်များပတ်သလို ဆိုဖာမှာ ထိုင်စေပြီး ဗိုက်နေရာကို ပတ်ပြီး ဗိုက်နာနှုန်း Labor Contraction ကို တိုင်းတာ...။ ၂၄ နာရီသွင်းတဲ့ဆေးနဲ့ သောက်ဆေး ၂ ပတ်စာ ပေးတာက ကလေး မမွေးလာအောင် ထိန်းပေးထားတာ......See More
January 20 at 9:41am · Like · 1
Yu Yu San ဖတ်သွားတယ် မ ရေ.. ရေစင် လေးအကြောင်းလေး ရေးပါဦး
January 20 at 9:42am · Like
Sonata Cantata Yu Yu San
January 20 at 9:43am · Like
သီတာရဲ့ 'မိခင်ဖြစ်သောကျမ' ပို့စ်လေးကို တင်တဲ့အချိန်လေးမှာ တီတင့်တစ်ယောက် ဗိုင်းရပ်စ် ဟက်ကာတို့နဲ့ နပန်းလုံးနေရတာမို့ လက်ပမ်းကျပြီး ခရီးထွက်သွားတာ မဖတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး ၂၅ရက်နေ့ကမှ ပြန်ရောက်တာမို့ ဒီကနေ့မှ ပို့စ်ကောင်းလေးကို ဖတ်ခွင့်ရသွားတယ် သီတာရေ။
မိခင်တိုင်း အတိတ်ဘ၀ကပေးလာတဲ့ ကံတရားပေါ်မှာ တစ်ယောက်တစ်မျိုး အသွင်ကွဲပြားပြီး လှုပ်ရှားခံစားနေရပေမယ့် 'မိခင်' ဆိုတဲ့ တူညီတဲ့ မေတ္တာဓာတ်ကတော့ တပြေးညီညာပဲနော်။ မိခင်တို့ရဲ့ နှိုင်းတု မမှီတဲ့ မေတ္တာလေးတွေ ကြည်နူးစရာ။
"မေမေကတော့ မရဘူး…ဒီငါးနှစ်အရွယ်ကလေးလေး ကိုလည်း မေမေက လိုအပ်လို့ ဆေးတိုက်တယ်.. သားသားက မြိုချရမယ်… ဒီလိုပဲ နားလည်တယ်။"
အတူတူပဲ သီတာရေ....မိဘတွေကတော့ သားသမီးတွေကို ချစ်ကြပေမယ့် တခါတလေ အရွယ်လေးတွေကို မေ့မေ့သွားတတ်တယ်...စိတ်ထဲမှာတော့ သူတို့လေးတွေတွက်ပဲ အမြဲ ဦးစားပေး စဉ်းစား စိုးရိမ်စိတ်ပူနေပေမယ့် ပြောသမျှ ဆုံးမသမျှစကားတွေကတော့ ချိုသာမနေဘူး သီတာရေ...ဒီလိုပဲ တို့တတွေကို မိခင်အစစ်တွေဖြစ်အောင် သူတို့လေးတွေဆီကပဲ သင်ကြားယူနေရတာ...။
မမတင့်ဆီက မှတ်သားအတုယူစရာတွေ အများကြီးရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော်
သိင်္ဂီရေ...မိခင်အစစ်တွေဖြစ်အောင် သူတို့လေးတွေဆီကပဲ သင်ကြားယူနေရတာ...ဟုတ်တယ်
ငါ့သူငယ်ချင်းက လေးလေးနက်နက် ကွန်မန့်ရေးပေးတာ ဖြစ်မယ်... ဒါပေမဲ့ နင့်သူငယ်ချင်း အူချာချာက ဒုံရင်းက ဒုံရင်း အူချာချာ အဆင့်က မတက်ပါဘူးဟယ်...း)